chikafu uye kubika | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: zvokudya uye kubika
Rasipberry Yakabikwa Berry Liqueur - Maitiro Ekugadzira
Mumwaka we raspberry, vakadzi vazhinji veimba vangangotumira mahebhu ane hutano kuti asunungure - kuitira kuchengetwa kusvika nguva yechando. Kubva pamasheya iwe unogona kugadzira chinwiwa chinonakidza icho iwe chaunogona kuzorora pazororo. Chinwiwa ichi chinowanikwa ...
Pakati pezvakasiyana-siyana zvetuckeji svutugadzike, ndinonyanya kuda awa matatu. Ini ndinogara ndichibikira imwe yazvo nyama, huku, yakagadzirwa-pamba kana kutenga machipisi, macaroni, pita snacks nezvimwe zvakawanda. Chaizvoizvo ...
Sosi yekuravira kwega kwega: TOP-5 yekubheka ye barbecue, appetizer uye main ndiro
Aya masosi anoshamisa ari kuwedzera kukuru kune ako aunoda madiro. Navo, chikafu chako chichava chakajeka. Kusarudzwa kwekubika. Cheese sosi pane 200 gr yakagadzirira-yakagadzirwa musvinisi masanganiswa: 110-120 gr hard cheese; ...
Iyi yekukweta, yekumberi appetizer inosiyana kubva kune vamwe vese mukunyorova uye siki iyo iyo yakasvibirira mitundu yemapuro anopa. Iyo yekushanda inonhuhwirira uye inonaka, kusanganiswa kwemakango uye michero mairi inopa kutaridzika kunoratidzika ..
Iyo yekutanga recipe yekukroshka nesalton yakarungwa
Muzhizha, vazhinji vanowanzove ne-okroshka patafura. Chii chiripo kuvanza, rudo rwevagari vedu vatinodya ichi chinozivikanwa. Mhando dzakasiyana dzeokroshka dzinozoshandirwa kune chero cafe neresitorendi, uye ...
Inonaka okroshka nemombe uye inonhuwirira kupfeka
Hauna kumboedza uye wabika yakadaro okroshka. Iyo yekubheka inonakidza iyo inowedzera akasiyana kune yezhizha menyu. Iyo ndiro inonaka uye inogutsa, uye yakarongedzwa nekrisiti yakashongedzwa nehupamhi hweanowedzera, inozorodza zvakakwana.
Snack Recipe - Sandwich Keke
Izvo zvakanaka kutarisa patafura yegala uye kuravira iyo yekutanga, muromo-kudiridza appetizer muchimiro chekeke rejecha. Chikafu ichi chine moyo, chinotaridzika kuyedza, chipfupi pakubika. A sandwich keke ichashanda seyakanaka kubatsira kune akatsamwa masaladi ...
Yakanyanya appetizer: yakabikwa mapeche nehutu, jerky uye chizi - yekubika
Iyi yekubheka inonyatsobatsira kana iwe uchida kubheka chimwe chinhu chepakutanga uye chakareruka. Isu tinofunga kupaza mapeche akabikwa ane miniature rolls, uye isa nzungu, tchizi uye imwe inonaka yakaoma yakaoma nyama mairi. Ye 8 rolls ...
Maitiro Ekugadzira Pumpkin Mbeu Supu
Yako menyu yechando inofanira kunge iine dzungu. Izvo zvichabatsira kupona kuchinja kwemwaka, kudziya mune yekutanga kutonhora mamiriro, kusimbisa kusadzivirira. Uye zvechokwadi, iwe uchazonzwa yakakosha mafaro kubva kune ayo akapfuma kuravira.
Zvikanganiso zvishanu paunenge uchichengeta mbatatisi
Hazvifananidzi kuti mbatatisi inonzi chechipiri chingwa. Mhuri dzakawanda dzinochengeta dzinenge mabhegi mashoma emiriwo ino inonaka yechando. Ndezvipi zvikanganiso zvinofanirwa kudzivirirwa kuti mbatatisi ifadze nekuravira kwayo kusvika pakukohwa kunotevera? ...
Yakasarudzika zucchini pamwe negarlic uye dill - nzira
Kusiyana ne zucchini, zucchini ine ganda dema uye denser, uye nyama ine juzi. Mune fomu yemarble, vanhu vazhinji vanofarira zucchini zvakanyanya - ivo vanozooma kuva vakaoma uye vakafuta. Sei ...
Pepper inopisa inopisa chaiyo!
Pepper dzakadaro dzisina kujairika dzakanaka uye dzakangoita seappetizer, uye sechinhu chinogadzirwa mune dzimwe ndiro. Iwe unogona kuzvishandisa ivo munguva yechando saladi, nyama ndiro, kugadzira sosi. Hot inopisa mu ...
Pakati pezvose zvinoshandiswa kubikwa makabeche, ndinofarira iyi zvakanyanya. Akatemwa "mabhoti" akazadzwa neunonhuhwirira uye wakasarudzika musanganiswa, anogara achibudirira patafura. Kune vazhinji vakadzi veimba, yakadaro yekuplanet nzira ichajaira ..
Adjika Recipe neProvencal Herbs - Spicy Yummy
Chero munhu chero akaravira izvi zvisinganzwisisike uye nekupisa adjika haazoendi kuchitoro kuti aronge. Yakabikwa zvinoenderana neiyi nzira, o sei yakanaka! Bikai mukombe wekuchengetedza kusvikira nguva yechando ...
Kusika "horseradish" muchiRussia: 2 recipe
Iyo inonyanya kufarirwa yehomberadish yekunyika muRussia. Iyo inobikwa chero nyama, yakabikwa mafuta, yakabikwa nyama yenguruve, nyama yakaomeswa. Chii chingave chakakomberedza: chidimbu chechingwa cheRye, matete emakwande ematombo enguruve, uye pamusoro peakatemwa ...
Onion mhete ndeye appetizer, zvaunoda kana shamwari dzikauya kuzonwa doro. Kuvira, hapana chakaipa kupfuura machipisi. Uye kunyangwe ivo vakabikwa muhuwandu hwakawanda hwemafuta, haasati akuvadza se ...
Redcurrant Jam Mashanu
Iyi jam inopa ascorbic acid uye akati wandei mamwe mavhitaminzi anodikanwa kuti asimbise kuchengetedzwa kwemuchando munguva yechando. Iyo mbiya ye redcurrant amajikiji ichave inobatsira iwe kwauri. MaBerg muiri ...
Vazhinji vanoda squid uye yekubika navo. Ino marine delicacy yakapfuma mune hutano mapuroteni uye zvicherwa, akakosha kune hutano hwakanaka uye hupenyu hwakareba. Akakwenenzverwa squid chikafu chinonhuwira, kubva ...
Maitiro ekubikisa cheke croquettes
Croquettes - chidya cheFrench cuisine. Rinoshandurwa rinoreva "crunch, bite off." Iyo appetizer ndeyemabhora madiki akagadzirwa kubva kune akasiyana zvigadzirwa, wozobikwa chingwa uye wakadzika-wakatswa. Yakapera makomkete zvinonaka ...
Iyo inonaka kwazvo turkey cutlets
Turkey, sekuziva kwako, nyama ine hutano yekudya. Iwe unogona kutanga kuidya iyo kubva paudiki hwehudiki. Turkey nyama inokurudzirwa kuti ive nehutano mukati mekufutisa, hypertension, muchembere. Haazove anobva kwaari ...
peji 1 peji 2 ... peji 644 Next Page
Mibvunzo ye30 mu database yakagadzirwa mu 0,387 masekondi.